Tsy fandriampahalemana : nozaraina faritra 4 miaraka amin’ny mpitandro filaminana ny eto Analamanga | NewsMada
Tsy fandriampahalemana : nozaraina faritra 4 miaraka amin’ny mpitandro filaminana ny eto Analamanga
Nametraka paikady vaovao indray hiadiana amin’ny tsy fandriampahalemana ny teo anivon’ny Prefet de police tamin’ny alalan’ny fizarana zone ho efatra ny eto amin’ny faritra Analamanga. Isaky ny zone dia samy manana laharana telefaonina ahafahana miantso ny mpitandro filaminana raha misy trangana tsy fandriampahalemana…
Mizara efatra mazava tsara ireo zone hiasan’ny mpitandro filaminana ireo : zone voalohany, ny eto Antananarivo renivohitra, ny zone faharoa, Antananarivo Atsimondrano, zone fahatelo, Antananarivo Avaradrano ary ny zone fahefatra ny eny Ambohidratrimo. “Ny Commissaire central no hisahana ny eto an-dRenivohitra ary ny lehiben’ny vondron-tobim-pileovana Analamanga, ny Kly Ravoavy no hisahana ny ivelan’ny renivohitra. Hisy ireo mpitandro filaminana mandeha an-tongotra sy mandeha fiara sy moto hisahana ireo zone ireo. Tanjona amin’izao, mba ho henika mpitandro filaminana ireo faritra ireo”, hoy ny fanazavan’ny Prefet de police eto Antananarivo, ny Jly Ravelonarivo Angelot, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly raha nanazava ity paikady vaovao hoenti-miady amin’ny tsy fandriampahalemana ity. Nohamafisin’ity manamboninahitra ity hatrany fa isaky ny zone dia samy manana laharana telefaonina vaovao azo iantsoana ny mpitandro filaminana raha misy olona mahita trangana tsy fandriampahalemana na fanafihan-jiolahy. Tanjona, mba hahafahana misoroka ao anatin’ny fotoana haingana ireny asan-jiolahy ireny satria misy mpitandro filaminana efa mipetraka raikitra amin’ireny zone voalaza teo ireny, raha ny fanazavana hatrany. Nanomboka tamin’ny heriny androany no nametrahana ireo mpitandro filaminana isaky ny zone efatra ireo. Efa misy, araka izany, ny paikady manokana napetraka amin’ny fomba anetsehana ireo mpitandro filaminana isaky ny zone satria mety hiteraka ahiahy amin’ny olona sasany ny hoe matetika efa lasa ireo jiolahy vao tonga ny antson’ireo niharan’ny fanafihana.
“Nilaza izy fa atao tsapan’ny vahoaka fa misy mpitandro filaminana hatrany eny akaikin’izy ireo”, hoy izy.
Efa betsaka ihany izay paikady napetraka hiadiana amin’ny tsy fandriampahalemana izay fa mbola tsy hita soritra ihany hoe nampihena ny asan-jiolahy izany fa vao mainka aza mihamitombo izany. Manginy fotsiny ireo mpitandro filaminana maty tsimpontsimponin’ny dahalo